I-marathon egijima ibhodlela yamanzi wezemidlalo China Manufacturer
Shenzhen Kean Silicone Product Co., Ltd. [Guangdong,China] Uhlobo lwebhizinisi:Manufacturer Main Mark: Americas , East Europe , Europe , Oceania , West Europe , Worldwide Ngaphandle:71% - 80% Izikweletu:BSCI, ISO9001, CE, FDA, MSDS, Test Report Incazelo:Ibhodlela leMidlalo yamanzi,Ukugijima ibhodlela lemanzi,I-Marathon Ukugijima Amanzi Amanzi
Home > Imikhiqizo > Ibhodlela leMidlalo leMidlalo > I-marathon egijima ibhodlela yamanzi wezemidlalo
Ibhodlela lethu lezemidlalo leMarathon eligijima lenziwa ngamaphesenti angama-100% ebhodini lokudla, kuphela ucezu lomlomo lwenziwa ngamaphesenti angama-100 okudla okungamakhemikhali, futhi sakha ne-bandage ibhodlela ngalinye, ngakho-ke uma usebenza, awudingi ukukhathazeka ngamabhodlela akho emanzini, futhi umlenze womlomo ube nomklamo we-valve, uma udinga ukuphuza, udinga nje ukudonsa umlomo ngecala lakho, futhi ungawaphuza njengamanye amabhodlela amanzi emva kwakho uphuze, ungawavala, nabo, akudingeki ukuthi uphinde uvule.
I-marathon egijima ibhodlela yamanzi wezemidlalo yimikhiqizo esemqoka enkampanini yethu. I- Marathon yethu egijima ibhodlela lezemidlalo ngokuyinhloko i-activicity yethu yasendlini. Okuqukethwe kweMarathon yethu egijima ibhodlela lamanzi lezemidlalo i-100% ye-BPA yebanga lobuchwepheshe bebanga lobuchwepheshe kanye ne-PP. I Marathon ezemidlalo egijima lamanzi yethu ngokuphelele non-enobuthi, futhi ovunyelwe iSigungu FDA / SGS / LFGB / CE. Kuyinto enothile, engazinzile. Ngakho ngiyaqiniseka ukuthi i- bpa yethu ikhululekile ibhodlela lamanzi lingcono kakhulu kuwe .Siye senza umkhiqizo we-silicone iminyaka engaphezu kwengu-10, kanye nebhizinisi lamazwe angaphezu kweminyaka engama-4. Sinesipiliyoni seminyaka eyisishiyagalolunye ekukhiqizeni Amabhodlela wamanzi angabheki , Amabhodlela wokuhamba we-silicone , ama- Silicone ahlukahlukene , Izingane ezithinta umgexo , Amakhemikhali ahlaziya amathoyizi , Izingane ezihamba nge-pacifier clips , I- Baby teething mitten , njll. Okokugcina, Siyizimboni, ngakho-ke singakunikeza izimpahla ngentengo yokuncintisana ngekhwalithi ephakeme kanye nezinsizakalo zobuchwepheshe.
Ibhodlela leMidlalo yamanzi Ukugijima ibhodlela lemanzi I-Marathon Ukugijima Amanzi Amanzi Ibhodlela leMidlalo leMidlalo Ibhodlela lezemidlalo eliqinile Ibhodlela lokuphuza amanzi Hlunga ibhodlela le-silicon yamanzi Ibhodlela leMidlalo leMidlalo elingabonakali